The Irrawaddy's Blog: ဖားမှ စုသို့ ၂ မှာ ဘာတွေများရေးထားပါလိမ့်
ဖားမှ စုသို့ ၂ မှာ ဘာတွေများရေးထားပါလိမ့်
Posted in: ဆောင်းပါး
November 25, 2010 at 3:27 PM
I don't agree with this guy 100% but I have the same question "why sanctions"? Do the sanctions really work when China, India, Korea, Singapore and Thailand are dealing with the junta greatly? Are the sanctions really designed to target the junta? Is forcing the garment factories close down well-targeted to junta? Is encouraging no tourism to Burma hurting the junta income? With all the sanctions, there are less and less job opportunities in the country and now all the ppl including talented and workers are out of country. All the ones left in the country still suffer and have to survive. With no job opportunities and international exposure, education does not have any value. There is no MNC or corporate to appreciate your degree and your skills are useless. So, nobody values education coz they know they have to go overseas eventually. and now, education sector is getting worse. It doesn't make sense to try to improve education sector when there is no decent job market in the country to appreciate the education. Sanctions do not work and are destroying the country worse than the junta.
မိုးမြင့် said... :
This guy is really no shame, withing this 20 years, our country become like that is not because of Daw su, there is very clear that the Junta administration is totally wrong and useless. What they do is just for their pocket only, for the people of Myanmar, got what? still poor, still undeveloped, no human rights, no media rights, some more Myanmar army leader they all want to close with communist country only, their thinking is to create big and strong army. where got for the people of Myanmar? This Min Swe must see the both side, then only he know who is wrong and who is right, but this Min Swe sure can't see real image because he don't have brain, inside head got Junta shit only. really foolish man.
Nelson Mandela strongly supported sanctions to pressure on the regime inSouth Africa before they get reconciliation. In 1991, December Nelson Mandela asked United Nations members to maintain sanctions against South Africa until his country hasanew constitution and democratically elected government.
Addressing the U.N. General Assembly, Mandela said apartheid is dying, but not dead. "We have not yet liberated our country," he said. "It is still ruled byawhite-minority regime, under an apartheid constitution. Therefore, we are faced with the continuing challenge to pursue the struggle until freedom is won."
Above excerpt is from Washington Post.
What Mandela said at that time is Rather than lift sanctions all at once, the world community should ease them in phases.
Even though they are in dialogue and 99% sure to get agreement, Mandela wants the world to ease sanction phase by phase. But for us, the other side never show sign for negotiation, no will to compromise. But I agree that the sanctions should be targeted only to them, should drop sanctions that could harmful to normal people. For sure, DASSK will look pros and cons of this issue, I have no doubt she loves our country and people, I believe she can make right decision on this.
To Phar Min Swe,
Our country becomes poorer than before within 22 years which is because of Amay Su? Asaman, do you haveacourage to blamealady who is in house arrest nearly 15 years to give up everything of her? Very shameful for you. I have no words to say the kind of evil person as you. Please don't try to help only Amay Su as her driver, be fair, please help to all poor people of our country as driver as you said, then I'll appreciate you in advance on behalf of our people. Seems your eye only can see Amay Su. let me give you an advice that please go and see with eye specialist since you can't see our poor people in your eye.
sanction ကို ဘာကြောင့် ထုတ်တာလဲ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ.. sanction ရုတ်သိမ်းအောင် ကျတော်တို့ ဘက်ကဘာတွေ လုပ်ပေးမယ် ဘာတွေ လိုက်လျောမယ် ဆိုတာတော့မရေးဘူး.. ရှိသမျှအပြစ်တွေ ကို ဒေါ်စု ဒေါ်စုကြောင့် ဆိုပြီး သောက်ရှက်မရှိ အော်မနေနဲ့ .. ခင်ဗျား ယောက်ကျားမဟုတ်ဘူးလား.. ဘယ်သူက အမှန်ကို ဝန်မခံရဲတာလဲ ခင်ဗျားတို့ ပထွေးတွေကိုအရင် သွားမေး..အခုလဲ ခင်ဗျားပထွေး တရုတ် ကုလား ကိုရီးယား asean နိုင်ငံ တွေနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား ဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲ.. သောက်သုံးမကျလို့ ပေါ့.. မီးမလာတာလဲ sanction ကြောင့်ပဲလား.. နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ သောက်ပေါတွေနေတဲ့ မြို့ ကို ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ဆောက်တာလဲ sanction ကြောင်.ပဲလား.. ဝန်ကြီးတွေ ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်လေးတွေ အိမ်သက်စေ့ ကားသက်စေ့ နဲ့ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေကြတာလဲ sanction ကြောင့်ပဲလား.. sanction ကိုရုတ်စေချင်ရင် ဘယ်သူ့ မှာအဓိကတာဝန်ရှိ သလဲဆိုတာကို သတ္တိရှိရှိတွေးပြီး သွားတောင်းဆိုကြ.. သောက်ရှက်မရှိ လိုက်မရမ်းနဲ့ .. ဘောင်းဘီဝတ် သေနတ်ကိုင် ပြီး ငါပြောတာအမှန် ငါပဲ မေတ္တာရှင် ကြီး ပုံစံနဲ့ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းတယ်
ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲ တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်လို့ ဖြစ်တာဟုတ်လား၊ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလား၊ ခွေးတောင်သိနိုင်တယ်။ အခုမှ ဒီလူ ဦးနှောက်မရှိတာ လူတိုင်းသိသွားပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကိုတောင် လွတ်လပ်စွာ မကျင်းပရဲ တဲ့ စစ်ခွေးအုပ်စု ကို တော့ အပြစ်မတင်ပါလား ငဖားကောင် ..ဟင်.
ကျေးဇူးပြုပြီး အမေစု လုံခြုံရေး ကို အထူးဂရုစိုက်ပေးကြပါ.. ဒီလူက စစ်အစိုးရ လက်ကိုင်တုတ် အရူးကြီးပါ.. အားလုံးသတိထားကြပါ.. ဗိုလ်ကြီးဝင်းထ်ိန် please please အရင်ကထက်ပိုဂရုစိုက်ပေးပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Please be careful. He (Phar Min Swe) was used asafuse by junta & it seems that they(junta) will create some probloems look like Depeyin(e.g. riot or assasinate to A May Su)
သောက်ရူးကြီး.. သက်သက် အန်တီစု စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်ရေးထားတာ.. ပေးမဖတ်နဲ့
ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ တုတ်ခုန်တိုး မလုပ်ပါနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆနုးစုကြည် က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ပါလို့ မပြောလည်း ငွေပင်ငွေရင်းများများစိုက်ထုပ်မယ့် သိက္ခာရှိ စီးပွားရေးသမားတွေက နိုင်ငံအပြင်ကနေ မလာပါဘူး ခင်ဗျားတိုင်း ပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ရင် ၀န်ကြီးမယားဆီ အခစားဝင်ရ တိုင်းမှုး အတွက် မယားငယ်ရှာပေးရ မြို့ နယ် အာဏာပိုင်တွေကို အောက်ကြို့ ရ အပြင် မီးကလည်း မလာ လမ်းတွေကလည်း မကောင်း ၃ ပေလောက် လမ်းလျောက်မိ တိုင်း ဂိတ်မျိုးစုံ ပေးရ ကမ်းရတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ ဥပဒေနဲ့သိက္ခာနဲ့ အညီ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေက မလာတာကို ဘယ်သူ့ အပြစ်လည်း ခုထိ မတွေးတတ်တာတော့ ခင်ဗျားလို လူမျိုးအတွက် နာမည်ပေးလိုက်မယ် "အရူး"
The guy is delusional. He wants attention. Just ignore him.
ignore phar min swe asamad man and don't waste NLD's energy for such useless insane.
တောင်ပိုင်းသား/အနုပညာသည် said... :
ဖားမင်းဆွေ ရေးထားတဲ့ စာကိုတော့ ဒေါ်စုမပြောနဲ့ ကျနော်တောင် အချိန်ကုန်ခံပြီး မဖတ်တော့ဘူး။ ဒီလူဘယ်လိုလူစား ဆိုတာ ဥပဓိရုပ် ကြည့်တာနဲ့ သိတယ်၊ ဘာပါမစ်၊ညာပါမစ် လိုချင်တယ် ဘာအခွင့်ရေးလေး လိုချင်တယ် ဆိုရင် နအဖ စစ်ဘိုချုပ်တွေဆီမှာ ရိုးရိုးသားသား ခြေသလုံးဖက် သွားတောင်စားပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘဝကိုစွန့်ပြီး အနစ်နာခံ၊လူထုကောင်းကျိုးတွေ လုပ်နေတဲ့ ဒေါ်စုကို လာပက်သက်ပြီး စစ်အာဏာရှင် အကြိုက်လိုက်ပြီး ရူးရူးပေါပေါတွေ လုပ်နေတာလဲ...။
အဲဒီကောင်ရေးတဲ့စာ ဖတ်စရာကိုမလိုတာ .... ဖတ်စေချင်သလား ... ???? ဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ...စစ်အစိုးရ မကောင်းတာပါရေးပါ
သောက်ရူးကြီး..နောက်တစ်ခါ ချီးထုပ်က ဖားမင်း ဆွေ ခင်ဗျား အလှည့် ဖြစ်သွားမယ်နော်...
ငါးမင်းဆွေဆိုတာ ငါးရောင်းတာလား၊ရုပ်ကတော့ ငါးစိမ်းသည် ရုပ်ပဲ။
Ah May Su should meet and convince this guy under the right security measures. It is not right for NLD to block the letter. Once Ah May Su, said that it's quite surprising that countries leaders are the last one to know what is happening in town. This guy is crap but she should see him if we believe in true democracy and the rules of dialogues. Otherwise, we will be like the junta, covering things and keeping the leader from what's going on. And I will be surprised and disappointed if she still doesn't know this incident coz leader should be transparent to the people and must have ways to learn what's really going on.
san dar win said... :
November 25, 2010 at 10:21 PM
ပေါ့ပေါ့ မမှတ်ကြပါနဲ့ ..သတိထားဘို့ ဖြစ်လာတဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသံပါ...လုံခြုံရေး ကို ဒိထက် စိတ်ချရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသာ စဉ်းစားကြပါ...အရူး..အရူးနဲ့ ..မထူးဇာတ်ခင်းတဲ့ သူနဲ့တွေ့ရင် ...ကျမတို့ ခေါင်းဆောင် ..ဆုံးရှုံး ရနိုင်ပါတယ်...နောင်ရေးအတွက် ...လူငယ်တွေကို အားကိုးပါရစေ..
ကိုငါးခင်ဗျား ကိုငါးအရေးအသားဟာ ရိုသေသလိုနဲ့ စော်ကားနေတာ မပေါ်လွင်လွန်းဘူးလားခင်ဗျာ။ စေတနာအမှားလို့တော့ ဖုံးကွယ်ဖို့ မကြိုးစားလိုက်ပါနဲ့။ ဒီလိုအရေးအသားကိုမှ ဘယ်ကို ဦးတည်မှန်းမသိရင် ကိုငါးရဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ကိစ္စတခုကို ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်လဲ တိုက်ရိုက်ပဲ ပြောကြတာပေါ့။ ဘာလို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဟိုရုတ်ရုတ် ဒီရုတ်ရုတ်လို့ ပြောနေမှာလဲ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ အမေရိကန်လို့ နာမည်တပ်ပြောလိုက်သလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုလဲ နာမည်နဲ့ ပြောလိုက်စမ်းပါ ကိုငါးရာ။ ကိုငါးလဲ ကိုယ့်အရွယ် ကိုယ်သိမှာပါ။ ဒီအရွယ်ရောက်တာတောင် အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမတင်ဝင်းလောက် အဲဒီနိုင်ငံကို နာမည်တပ်ပြီး ပြောရဲတဲ့ သတ္တိမရှိသူ ဖြစ်နေဆဲပဲလားခင်ဗျာ။ ကောလဟာလတွေ ပြောကြသလို အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့် အပိတ်ခံရမှာများ ကြောက်နေသလားဗျ။ နောက်ဆုံး မေးချင်တာကတော့ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မိတဲ့ အမှားတွေ ဘယ်လို သိသွားလဲဗျ။ သူတို့ သိသွားကြောင်းကိုများ ကိုငါးဆီကိုများ တနည်းတဖုံနဲ့ လှမ်းပြောပြကြလို့လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုငါးဆီမှာ မရှိတဲ့ မေတ္တာရောင်ခြည်ကို မမျှော်လင့်သလို ပြည်သူများမှာ ရှိတဲ့ မေတ္တာရောင်ခြည်ကိုလဲ ကိုငါးအနေနဲ့ မမျှော်လင့်မိဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ သာမန် အနေအထားဖြင့် ..... ကိုတံငါ။
ြဲုကားထဲံဓါးစာခံအဖြစ်မခံပါနဲ့၊မင်းလဲ စွမ်းအားရှင်ပဲ၊နောင်ကျရင်မင်းလဲမင်းရေးနေကျသတင်းစာမရှိတော့ စားစရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊
ခင်ဗျားတို့ ဘလော့က တင်ထားလို့ ဖတ်မိတာပါ ဒီအရူးရေးတာမှားတင်ရသလားဗျာ ဖတ်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲ အပြစ်တင်လိုက်မယ် ဥပဓိရုပ်ရောပုံစံရော အရူးလိုဘဲ နွားမင်းဆွေ
Min Swe ! Try to educate yourself first!!!
ဘယ်သူက ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု လုပ်သလဲ ဆို တာလဲ ငါးမင်းဆွေ ဆောင်းပါးရေးစမ်းပါ။ ဒီလူ ဆန္ဒပြတာကြာ တော့ အဲဒါကြတော့ လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်အောင် ဆူပူ တယ်လို့ ဘာလို့ မပြောကြလဲ
ပြည်သူတွေလိုချင်တာက တိုးတက်မှု.. အန်တီစုလုပ်နေတာက ဒီမိုကရေစီ.. တခြားစီပဲဆိုပါလား..။
ဒါဆိုလဲ တိုးတက်အောင်မလုပ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေကိုလဲ နည်းနည်းဝေဖန်ဦးမှပေါ့..။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက.. လူတွေကိုဖိနှိပ်ပြီး ဘာအခွင့်အရေးမှမပေးပဲ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်.. ကိုယ်ချတဲ့ဥပဒေမှ ကိုယ်မလိုက်နာတဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်ကနေ လွတ်မြောက်ရေး ဆိုတဲ့သဘော..။ အဲဒီ့အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်ရင် တိုးတက်မှုတွေရှိလာမှာပေါ့ဗျာ..။
ခုလိုချိန်မှာ ခင်ဗျားက နောက်က ပထွေးတွေအားကိုးနဲ့ ရိုက်ပေါက်တွေလုပ်နေ.. ခေတ်မကောင်းရင် အသတ်ခံရလိမ့်မယ်.. ကြပ်ကြပ်သတိထား။
ဒီလူ(ငါးမင်းဆွေ)က တစ်လမ်းသွားကြီးပါ။ "စံ" လွဲနေဘီ။
သူစာဖတ်ရရင် သွေးတိုးလာတယ်။ ငါးတန်းက ငါးစိမ်းသယ်တွေ ရန်ဖြစ်သလို ရေးထားတာ။ နောက်တော့ မဖတ်တော့ဘူး။စာတွေက လက်တွေ့နဲ့ကွာဟနေပြီး အဆင့်မရှိလို့။ တဖက်သတ်ဘဲ ပြောနေလို့။
လူတိုင်းသိတယ်။ စစ်အစိုးရ သတင်းစာရဲ့ မူပိုင်ကလောင်ရှင်ကြီးလေ။
သနားတယ်။ ဦးနှောက်ရှိပေမယ့် ဥာဏ်အမြင်မရှိလို့။ အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘ၀ရပ်တည်ရေးကို ဦးစားပေးနေတဲ့လူ။ဖားတဲ့စာတွေရေးနေလို့။
ရှေ့မှာတွေ့ရင်ထ ဆဲ ပြစ်မိမှာ အသေအချာဘဲ။
ငါမင်းစာကို သေသေချာချာဖတ်ပေးပါတယ်။ မင်းဘာဆိုလိုလဲဆိုတာလဲသိချင်လိုပါ။ မင်းစာပါ အကြောင်းအရင်းထဲမှာမင်းမိသားစုဆွေမျိုးတွေအကြောင်းထည့်ကြွားသွားတာကတော့မကောင်းပါဘူး။ မင်း ညီမလေးကလဲ တော်တော် အောက်ပိုင်းသောင်းကျန်တာဘဲနော်။ အပျိုဖေါ်ဝင်စမိန်းခလေးက ၂၂ နှစ်အတွင်း ကလေး၃ယောက်နဲ့ သမီးအကြီးတောင်အပျိုဖြစ်နေပြီးလား။ မင်းအမျိုးတွေက အပျိုဖေါ်ဝင်တာနဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူနော်။
မြန်မာနိုင်ငံ မဖွံဖြိုးတာ စီပွားရေးပိတ်ဆို့လိုမဟုတ်ဘူး။ အဂတိ (လဒ်စား) လိုက်စားမှုကြောင့်သိရဲလား။ အဂတိလိုက်စားမှုရှိနေသရွေ့ ဘယ်စီပွားလုပ်ငန်းရှင်အကြီး ကြီးမှမလာဘူး။ မင်းတို့ကိုဖင်ချမယ့် လဒ်ပေးလဒ်ယူလုပ်ပြီးဂွင်ရှာမဲသူဘဲရမယ်။ Singapore နိုင်ငံဘာလိုတိုးတတ်သလဲ။ သူမှာဘာသဘာဝသယံဇာတ မှမရှိဘူးနော်၊ ရေတောင်မရှိဘူး။ မင်းသိလား။ Singaopore တိုးတတ်တဲအခြေခံက လဒ်ပေးလဒ်ယူမှု့အနည်းဆုံးဖြစ်လိုဘဲ။ Singapore က the whole world မှာ လဒ်စားမှုအနည်းဆုံး၃နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်။ ငါတိုမြန်မာနိုင်ငံကတော့ လဒ်စားမှု့အများဆုံး၃နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်။ စီပွားရေလုပ်ငန်းအကြီးတွေရဲ့ ဘယ်သူဌေးကတော်ကမှ မင်းတို့ရဲအာဏာရူးကြီးမိန်းမကိုလာမဖါးဘူ။
မင်းက ဘယ်ကလာမယ်မှန်မသိတဲဘီလျှံအကြောင်းပြေနေတယ်။ မရသေးတဲ့ငွေတွေအကြောင်း၊ မသေချာသေးတဲငွေအကြောင်းမင်းမပြောခင် ရပြီးသား (gas ရောင်းလိုရတဲ) ဘီလျှံတွေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့အရင်စုံစမ်းတိုင်ပြည်ပြန်ရအောင် ယူတာက ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။
မြေလေး ငါးဆွေမင်း (မင်းကိုမြေးလိုခေါ်တာ ချစ်လိုမဟုတ်ဘူး မင်းမတွေးအခေါ်က နိုးဆိုခလေးလောက်မရှိလို့) အမြင်မှန်ရနိုင်ပါစေ။
O2 said... :
နှစ်မျက်နှာလောက် ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ရေးထားတာတွေက ယူဆပါတယ်.. အကြံပြုခဲ့ပုံ ရပါတယ်.. ဆိုတာတွေချည်းပဲ။ တိကျတာ တခုမှ မရှိဘူး။
ဦးငါးစိမ်းသည်က အမေစု ဒရိုင်ဘာ လုပ်ချင်သတဲ့
ဦးနှောက်မရှီသူတွေ ပေါနေတော့လည်း .. ခက်သားနော့် ... .. ဦးနှောက်မှ မမီတာ ဒီလောက်ပဲမြင်မှာပေါ့ ... ငါးမင်းဆွေ ဖားမင်းဆွေ၇ာ .. အသားထဲကလောက်ထွက် .. စစ်ကျွန်ဘ၀မှာမှ .. နောက်အနှစ်200 လောက်နေချင်သေးတယ်ထင်တယ် ...နေချင်မှာပေါ့ ဖ...ားပြီး လုပ်ကွက်တွေ အများကြီးရထားတာကို .. ဒါကိုထည့်ပြောဦး ဖားမင်းဆွေ ..း.. .. နောက်ထပ် ဘာ Permit တွေ လိုချင်သေးလဲမှ မသိတာ ... ... ... .. ဒေါ်စုကပဲ လုပ်ရသေးတယ် ရှီသေး .. ဒီလူတွေကို ဒီလိုဒဏ်မခတ်ေတော့ ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမလဲ .. ပြည်သူထမင်းစားရေး ဆိုတာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာ .. ပိတ်ဆို့မှုလုပ်လို့ .. စီးပွားပျက်တယ် .. သူတို့မိသားစုတွေ ဂုတ်သွေးစုပ်နေတာ စစ်အုပ်စုက ... လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး .. ဒါကိုထည့်ပြောဦး ဖားမင်းဆွေ ရှင်လည်း လုပ်ငန်းတွေ အများကြီး ရထားတယ်မလား ဖားလွန်းအားကြီးလို့လေ .. သောက်ရှက်မှ မရှီဘူး .. .. သူ့ဟာသူ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတယ်လုပ်နေသေးတယ် ...... သောက်ရှက်မရှိဘူး ... မြင်ယောင်သေးတယ် .. အလိုတော်ကျ လုပ်နေပြီးတော့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတယ်လုပ်နေသေးတယ် .. ဒီလိုစာလောက်ကတော့ လမ်းဘေးက ကလေးတောင် ရေးတတ်တယ် ... .. ... .. ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတာ .. လက်ရှိအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေ ပေါ်မှုတည်တယ် .. စီးပွား ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာ သံတမန် နည်းအရ ဖြတ်တောက်တဲ့ သဘော .. .. အုပ်ချု့ပ်တဲ့သူတွေ ရဲ့ ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာ မှုတည်တယ် ဘယ်သူမှ တိုက်တွန်းလို့မရဘူး .. ဒါကိုမှတ်ထားလိုက် .. ..အနောက်အုပ်စုအနောက်အုပ်စုနဲ့ .. .. ... လူလိုတွေးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် .. .... .. ပြူည်သူတွေ ထမင်းဝအောင် အဲဒီစစ်အုပ်စု မိသားစုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မတရား သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ .. လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပြည်သူတွေကို ကျွေးပါလား .. ဒီလောက်ချစ်နေရင်လည်း .. .. .. .. လုပ်ကွက်မရှိ ရှိသမျှလုပ်ကွက်တွေ အကုန် .. စစ်ခွေးတွေ ယူထားပြီးတော့ ... ..... ပြည်သူတွေ ထင်းငတ်လို့ .. အဲဒါ အိမ်ရျင်လုပ်တာပဲ အိမ်တ်အိမ်မှာ ထမင်းငတ်ရင် .. အဲဒါအိမ်ရှင်မှာ တာဝန်အပြည့်ရှီတယ် .. သူများ အားမကိုးနဲ့ ဆိုတ .. သူတို့ပဲပြောပြောနေကြလေ .. .. နေကြည်ပါလား ကိုယ့်ဟာကို ..အခုတော့ သူများ အားကိုးချင်နေတယ် . အကူအညီလိုချင်နေကြတယ် .. .. အရှက်ကိုမရှိဘူး . ... ပြည်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဟာကို ဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲဆိုတာ .. ကို ..
ဟေ့ကောင် ငဖားမင်းဆွေလာပြန်ပြီလား ဘာတဲ့ အခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် ဒေါ်စုကလုပ်လို့ တိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြအောင် တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ၊ ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းတော့လဲ xxxတွေက အဆင့်မရှိတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမှမရှိတာ ထားလိုက်တဲ့စေတနာတွေ မင်းစာကိုငါဆုံးအောင်မဖတ်ဖြစ်ဘူး ကျော်လွှားပြီး ဖတ်လိုက်လို့ ၃ မျက်နှာလောက်အထိမှာဘဲ ငါ့ရဲ့သီးခံနိုင်မှုကုန်သွားလို့ရပ်လိုက်ရတယ်။
one little girl who love A May Su said... :
ဖိုးလမင်းကြီးကိုလူတွေကချစ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ သူခိုးတွေကတော့ မုန်းကြတယ်
ိုနိုင်ငံကိုရုတ်ရုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအမေစုမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ နင်ကကောဘာလဲ။ မိကြိုင်လင်ငယ်လား။
ဖားမင်းဆွေ comment တွေကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စမ်းပါ။
so so shamesless guy ? which genral ask you to do this way and did u get how much?
Don't look for money only , look for diginity .
Now i want to kill u
ကျွန်ံတော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ လို့မပြောနဲ့ကွ! မင်းလိုသူတောင်းစား တွေလို့ သုံးမှ မှန် မှာ.. ပိုက်ဆံမရှိလဲရိုးရိုးတောင်းစားရင် ပေးပါတယ်ကွာ..
လွင်မ said... :
မြန်မာပြည်သားအားလုံး ဘာပဲလုပ်လုပ် widely လုပ်ရင် wisely လုပ်ကြဘို့လိုပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ခုလိုချိန်မှာ emotionally မလုပ်ပဲ ဣနြေ္ဒရရ၊ သိက္ခာရှိရှိ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ နအဖဘက်က နည်းမျိုးစုံနဲ့ သွေးတိုးစမ်း နှောက်ယှက်လာတာကို ခုလို့ထင်မြင်ချက်မျိုးစုံနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်ဘို့လိုသလို တစ်ဖတ်ကိုလဲ ဟန့်တားနှိုင်အောင် သတင်းပေး အကြံပေး ကျိုးစားကြဘို့ ၀န်းရံကြဘို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဆရာတော် သံဃာတော်များလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေတ္တာပို့သ၍ အန္တရယ်ကင်းအောင် စောင့်ရှောက်တော်မူကြပါဘုရား။ Do be mindful, and do wisely when we do something widely please.အားလုံး ညီညီညာညာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းအကြံပေး၊ ထင်မြင်ချက်ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားအားလုံးရဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို လေးစားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်.....
Bloody fool...min swe.
ဒီမှာ ငါးမင်းဆွေ.. ဖားမင်းဆွေ.. ငါးတစ်ပိုင်းဖားတစ်ပိုင်း မင်းဆွေ..
မင်းလိုကောင်မျိုးတွေ များလေလေ.. ငါတို့နိုင်ငံ နစ်လေလေ ပဲကွ..
ကြက်သခိုးရ.. မင်းလို သူများ ဦးနှောက်နဲ့ လူလုပ်နေတဲ့အကောင်
ကများ ပြောရတယ်လို့ကွာ…. အမေစု ကားတော့မောင်းလို့မရဘူး..
မင်းက စောက်ပေါ သန်းရွှေရဲ့ ချီးထုပ် ပဲထမ်းပေါ့.. ဗိုက်စာလာရင်လည်း
ဖွင့်စားလိုက်ပေါ့ကွာ… မင်းဒါမှ အားရှိပြီး….ဂေါက်ကြောင်ကြောင်တွေ
ထပ်လုပ်လို့ရမှာ…အော်မေ့နေလို့.. မင်းနဲ့ဂိုဏ်းတူ ညီအစ်ကို
ခပ်လွပ်လွပ် ခပ်ကြောင်ကြောင် ဟိုအကောင်ကိုလည်း ပေးစားလိုက်ဦး..
ငါးမင်းဆွေ ကို ကိုယ်ကမလုပ်ရပဲ သူတို့ဖာသာလုပ်ပြီးနာမည်ဖျက်အုန်းမယ်
မတော်တဆ အသက်ထွက်သွားရင်လဲ ငြိမ်းချမ်းရေးပေးလိုက်သလိုဖြစ်မယ်
swarn said... :
the old dogs have new dirty tricks again..it'sawakeup call..be careful..
အမြင်အတူ ငါ့ရန်သူဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်စုမှာလည်း အမှားတွေရှိတာပဲ လူတိုင်းမှာ အမှားဆိုတာရှိတယ်။
ဒီတွက် ဒေါ်စုမှားနေတာကို ထောက်ပြတာကို အားပေးတယ် အခုလည်းလုပ်ရမယ် နောင်လည်းလုပ်နေရမယ်။
သူ့နာမည်ကိုငါးမင်းဆွေအစား နွားမင်းဆွေ လို့ပြောင်းသင့်တယ် နွားတွေကသခင်ကကြိမ်တို့ပေးလိုက်ရင်ဘွတ်အဲဆိုပီးအော်ပီးပြေးတယ်လေ
ခုလဲသူ့သခင်က ကြိမ်တို့ပေးလိုက်လို့ထင်တယ် ဂယောင်ဂတမ်းနဲ့ထပီး
"မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန်ဒက ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုတာထက် စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ဖို့” ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ တန်းတူအခွင့်အရေး မရှိခြင်း (ဦးတေဇကိုတော့ ပါမစ်ချ၊ ကျန်တဲ့သူတွေ မချ)၊ ဥပဒေမဲ့ လာဘ်စားခြင်း (ဘောက်ချာမပါတဲ့ အခွန်အမျိုးမျိုး)၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်ခြင်း (ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့) .. စတဲ့ အ-ဓမ်မမှုတွေရှိနေသရွေ့ ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေးချောင်လည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ .. စုပ်လဲစူး၊ စားလဲရူးဆိုတာလိုမျိုး ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ အဲဒီ အ-ဓမ်မ မှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာကတော့ ”ဒေါ်စုပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီပါပဲ”။ . ဖားမင်းဆွေ ရေ .. ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် လေ့လာလိုက်ဦး။
Min Swe, your idea 100% wrong, you must apologize to Daw Aung San Suu Kyi and NLD supporters and peoples of myanmar & supporters of in the whole world.
ဒီစာလဲ သူရေးတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
နအဖ ဆင်ုကုံကံနေပြီ။
ရုပ်ကိုကသေရင်တောင် လဒ မစားမဲ့ လဒ ရုပ်နဲ့..ချီးပုံး
burma has been the least developed nation since thakoe nay win's time. ie b4 sanction . myat khine n min swe are sentenced to death for the crimes committed against the people of burma.
ခင်ဗျားကြီးဟာ ငါးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ မနှိုင်းအပ်တဲ့ အတွက် ခွေးနဲ့နှိုင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခွေးကို တော်တော် အားနာမိပါတယ်။ ချီးထုပ်ကြီးကို ချီးထုပ်တွေနဲ့ ထောက်ခံပေးကြပါ။ အမြန်ရှင်းပေးကြပါခင်ဗျာ ဒီချီးထုပ်ကြီး ကို။ လူသားတွေ အားလုံးအတွက် အသုံးမ၀င် ၊ ဆိုးကျိုးသာပေးတဲ့ ဒီချီးထုပ်ကြီး။ မိုက်တွင်း နက်လိုက်တဲ့ ခင်ဗျား မြေမြိုအုံးမယ်။
ငါးမင်းဆွေဆိုတဲ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကောင်ကို ဂျင်ကလိနဲ ပစ်ဖို့ သင့်နေပြီ။ဒါမှ အမိုက်ဇတ်တုံးမှာ။
November 26, 2010 at 8:36 PM
NLD က လူငယ်တွေကိုအကြံပေးခြင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးခွေးမွေးကြပါ ခွေးငါးကောင်လောက်မွေးပါ အရူးတွေလာရင် ခွေးတွေလွှတ်ပေးလိုက်
ko shwe ko myo ngar min swe,go to the hell.
Hteink Min said... :
သူရေးထားတဲ့ စာတော့ ၂ ရွက်ပဲ ဖတ်မိပါတယ်.. ဆက်မဖတ်ချင်တော့လို့.. ကော်မန့်တွေက ပိုဖတ်လို့ကောင်းသဗျ.. ငါတစ်ပိုင်း ဖားတစ်ပိုင်း မင်းဆွေဆိုလား။ နအဖ မီဒီယာ ရေးတဲ့သူဆိုကတည်းက ဘာကောင်ဆိုတာ သိပြီးသား။